Horudhac: Arsenal vs Manchester United… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka adag ee caawa ka dhacaya Emirates) – Gool FM
Horudhac: Arsenal vs Manchester United… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka adag ee caawa ka dhacaya Emirates)
Haaruun January 1, 2020
(London) 01 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa maalinta ugu horreysa sanadka cusub ee 2020 waxa ay booqanaysaa naadiga Arsenal kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Kulankii labadaan kooxood ku dhexmaray garoonka Old Trafford ayaa ku soo dhammaaday barbaro 1-1, koox walibana waxa ay doonaysaa iany kulankan adkaato si rajadeeda afarta sare ay kor ugu qaado.
Taariikhda: Arbaco, 01 Jan 2019
Arsenal ayaa soo dhoweyn karta laacibkeeda khadka dhexe Granit Xhaka kaasoo seegay kulankii ay gurigooda guuldarrada kala kulmeen Chelsea, maadaama uu xanuunsanaa.
Hector Bellerin, Gabriel Martinelli, Dani Ceballos iyo Rob Holding ayaa dhammaantood soo laaban kara, laakiin Sokratis ayay u badan tahay inuu seegi doono kulankan, iyadoo Calum Chambers uu isna shaki ku jiro maadaama uu qabo dhaawac jilibka ah.
Dhinaca kale Manchester United laacibkeeda khadka dhexe ee Paul Pogba ayaan la safrin xiddigaha kooxda ee Tareenka u raacay London, waxaana laga yaabaa inuu seego kulankan.
Scott McTominay ayaa isaguna seega kulankan, kaasoo muddo bil ah garoomada kama maqnaan doona dhaawac jilibka ah.
Eric Bailly ayaa ku soo laabtay tababarka waxaana uu ciyaari karaa markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan.
>- Kooxda Arsenal ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay wajahday Manchester United, waxaana ay ka haysataa 1 Guul iyo 2 Barbaro, afar kulan guuldarro la’aan kama ahayn iyaga tan iyo bishii Febraayo sanadkii 1999-kii, markaasoo ay ka qaateen 3 Guul iyo 1 barbaro.
>- Man United ayaa khasaaro la kulantay saddex ka mid ah afarteedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay booqatay Arsenal, kulanka kalena guul ayay ka soo gaareen, waana in ka badan intii ay ka soo heleen 13-kii kulan ee markaas ka hor ay tartankan ku booqdeen garoommada Emirates iyo Highbury, markaasoo ay ka soo qaateen 4 Guul, 6 barbaro iyo 3 Guuldarro.
>- Kani waa kulankii saddexaad ciyaaraha sare ee horyaalka oo ay wada ciyaaraan kooxaha Arsenal iyo Man United maalinta koowaad ee sanadka cusub, Red Devils ayaana guuleysatay labadii kulan ee hore waxaana ay ku adkaatay min 2-0 waana 1912-kii iyo 1949-kii.
>- Marka ay ku ciyaarayaan kulankooda ugu horreeya horyaalka ee maalinta ugu horreysa ee gurigooda Arsenal guuldarro kama soo gaarin tan iyo 1985, markaasoo ay 1-2 khasaaro ah kala kulmeen Tottenham, guul ayey gaartay 13 jeer waxaana ay barbaro galeen siddeed kulan ilaa iyo markaas.
>- Ma jirto koox ka guulal badan horyaalka Premier League, marka ay ciyaareyso maalinta koowaad ee sanadka cusub naadiga Arsenal oo guuleysatay 9 jeer.
>- Man United ayaa guuleysatay kulankeedii ugu horreeyay horyaalka maalinta koowaad ee sanadkan afartii sano ee ugu dambeysay, guuldarradoodii ugu dambeysay ee noocan oo kale ah waxay ahayd sanadkii 2014-kii, iyagoo gurigooda jooga ayayn guuldarro 1-2 kala kulmeen Spurs.
>- Arsenal ayaa raadineysa inay ka fogaato inay ku guuldarreysato garoonkeeda shan kulan oo isku xigta tartammada oo dhan markii ugu horreysay taariikhdooda.
Horudhac: Manchester City & Everton… (Tababare Carlo Ancelotti oo doonaya inuu guulihiisa xiriirka ah sii wato)
Real Madrid oo tallaabadii koowaad u qaaday saxiixa Sadio Mané